May 15, 2008, 5:07 am Filed under: News And Activities, Strongly Suggestion အာဏာရှင်တုန်လှုပ်သော ၂၀၀၈ တဘောင်
ကျွန်မဟာ ဗေဒင်တွေ ယတြာတွေကို အပြည့်အ၀ယုံကြည်သူမဟုတ်သလို ၊ လုံးဝ မယုံကြည်သူလည်း မဟုတ်ပါ။ အပြည့်အ၀မဟုတ်သည့်တိုင် အထိုက်အလျောက်တော့ ယုံကြည်မှုရှိပါသည်။ နအဖစစ်အာဏာရှင်များ၏ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းလွန်းသော လုပ်ရပ်များနောက်ကွယ်မှာ ယနေ့ထိတိုင် ထိုလူများ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် မလှုပ်တလှုပ်ထိုင်နေနိုင်ခြင်းမှာ မတရားသော အောက်လမ်း ၊ ဗေဒင်ယတြာအတတ်ပညာများအချို့ ပါဝင်နေသည်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံထားပါသည်။လွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းခန့်က အတွင်းလူများထံမှ တိကျသော သတင်းတစ်ခုကို ကျွန်မ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေကြီးဟာ သူ့ရဲ့နေ၀င်ချိန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့ တဘောင်ကို သိရှိပြီးချိန်မှာ ယခုလို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကို ပိုမိုဝင်ခွင့်မပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေကြီးကို ဟောကြားထားသော အကြောင်းအရာမှာ `အနောက်နိုင်ငံသား အဖြူစစ်သားတစ်ယောက်ဟာ စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်အတွင်းကို ခြေချပြီး ရောက်ရှိလာခဲ့ရင် .. လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်တို့၏ နေ၀င်ချိန်ရောက်ရှိပြီ´ဟု ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်မှုအနေနဲ့ ပြန်လည်ယတြာချေမရတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို မြန်မာပြည်မြို့နယ်များသို့ လုံးဝ ၀င်ခွင့်မပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်မှ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် အလွန်အကျွံကူညီချင်နေတာဟာ စစ်အာဏာရှင်အတွက် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှု ဖြစ်နေပါတယ် .. ။ ယခုအချိန်မှာ ပြည်သူလူထုကို သေချာကူညီနိုင်ဖို့က ပထမအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေ မပါပေမယ့် ပါသင့်သလောက်လည်း တွဲပါသွားရမှာပါ။ မုန်တိုင်းဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်လုပ်လို့ တိုက်ခတ်လာတာမဟုတ်ပေမယ့် ယခုကဲ့သို့ သေဆုံးသူများ တစတစ ပိုမိုများပြားနေတာ ၊ လိုအပ်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ မလုပ်ခဲ့တာ ၊ နိုင်ငံတကာအကူညီတွေ လက်မခံတာ ၊ ငတ်ပြတ်နေသော ပြည်သူလူထုကို ထိရောက်စွာ အမှန်တကယ်ကူညီမှုမပေးတာ … အစရှိသောအချက်များဟာ လူမှုရေးအနေနဲ့ အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်နာကျင်မှုဖြစ်မိသလို နိုင်ငံရေးအရလည်း အာဏာရှင်ဘက်မှ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်၏ဆရာကြီးများ ဟောကြားလိုက်သော တဘောင်`အနောက်နိုင်ငံသားစစ်စစ် အဖြူစစ်သားတစ်ယောက်ဟာ စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ လက်ရှိအချိန်ကာလအတွင်း ၂၀၀၈မှာ မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်အတွင်းကို ခြေချရောက်ရှိလာခဲ့ရင် …. စစ်အာဏာရှင်များ ဘုန်းကံရော ၊ ရှိသမျှ အဆောင်အယောင် အာဏာများအားလုံး ကျဆင်းပြီး နေ၀င်ချိန် ရောက်ကိုရောက်ရလိမ့်မယ် …….. ´
Download English VersionDownload Myanmar Version Like this:Like Loading...
Comment by Wunna Ko Ko
May 15, 2008 @ 5:33 am Reply	I think it’s not done yet. He just visited to Yangon only .As per ‘ta baung ‘ , soldier have to enter the capital of myanmar. They just change capital to Pyinmanar ( Nay Pyi Taw).
Comment by sakarwar
May 15, 2008 @ 2:50 pm Reply	Just my opinion only
May 15, 2008 @ 2:51 pm Reply	Lets, unite, stand as one (by all of us) and demand US UK and UN to take “ACTION”
May 15, 2008 @ 11:50 pm Reply	To blog readers, I agree with the post of Ms. Lin lat cos one of journalist Kyae Mon (Mirror) U Thaung wroteanovel like this mentioning the detail of what was happening among those top dictators in Myanmar. I think U all might have heard about that. It is U Nay Win Ei Pyar Ta Soat. U can download it from this linkhttp://www.esnips.com/doc/0603e69c-3847-4cd9-be16-a93150763721/UNayWin-eiPyarTaSote
There U can read and enjoy how these BoDaw or burmese astrologers are influencing over these dictators. The contents are consistent with I have heard in my life. I was at first wondering these asamatter of heard and say.But now it is real matter of Myanmar Dictators peoples. Anyone who have further novel of KyaeMon U Thaung, pls post the downloable link in Ms. Lin Let block. I also recommend all of U to read the book bonaywin.pdf.
Comment by onemyanmar
May 16, 2008 @ 1:14 pm Reply	To blogreaders, I agree with the post of Ms. Lin lat cos one of journalist Kyae Mon (Mirror) U Thaung wroteanovel like this mentioning the detail of what was happening among those top dictators in Myanmar. I think U all might have heard about that. It is U Nay Win Ei Pyar Ta Soat. U can download it from this linkhttp://www.esnips.com/doc/0603e69c-3847-4cd9-be16-a93150763721/UNayWin-eiPyarTaSote
May 16, 2008 @ 1:20 pm Reply	believe everything will be done as ta boung goes very very soon, with lessest being killed and suffered. this is the only way….for the time being. country, people has been ruled by such thing since years …. and people have been killed and suffered since then…. if there isabegining, there must be an end… this isaright time of course! it isaright time to accept, to get what they paid for…. fair enough!
Comment by yea
May 16, 2008 @ 4:01 pm Reply	it’s all rumors. 110% wrong. use ur brain before believing the rumors. quite disappointed with such useless rumors.
Comment by Naung Latt
May 16, 2008 @ 4:28 pm Reply	ယနေ့အချိန်အခါမှာ အနောက်နိုင်ငံ ကယ်ဆယ်ရေးလူတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို သွားဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထု လိုအပ်နေသော အကူညီရဖို့အတွက်ရော ၊ နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ တဘောင်ကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကာကွယ်နေသော စစ်အာဏာရှင် နေ၀င်ချိန်ရောက်ဖို့အတွက်ရော … ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ထဲရောက်သွားအောင် ကျွန်မတို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအားလုံး တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Comment by kogyi
June 1, 2008 @ 4:52 am Reply	အရင်ကတော့ ဘလော့တွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ အားရင်တော့ တခါတလေ၀င်ဖြစ်တယ်။ ၀င်ရင်လဲ ဘလော့တော်တော်များများကိုလိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ post တစ်ခုကိုဖတ်ပီးသွားတော့ စိတ်ထဲမှာတော်တော်အံ့သြသွားမိတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်မကျတာလဲ တွေ့ လိုက်ရလို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ (ယနေ့အချိန်အခါမှာ အနောက်နိုင်ငံ ကယ်ဆယ်ရေးလူတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို သွားဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထု လိုအပ်နေသော အကူညီရဖို့အတွက်ရော ၊ နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ တဘောင်ကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကာကွယ်နေသော စစ်အာဏာရှင် နေ၀င်ချိန်ရောက်ဖို့အတွက်ရော … ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ထဲရောက်သွားအောင် ကျွန်မတို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအားလုံး တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ) ဒီစာနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ပါ။ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပြောကြ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူ(တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ) တော်တော်များများကတော့ ကိုယ်ကောင်းဖို့ ထက် နိုင်ငံကောင်းစားဖို့ ရာ ဦးတည်ကြတယ်ဆိုတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အမြင်တွေ၊ အယူအဆတွေသာ ကွဲနေကြတာပါ အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဘလော့တော်တော်များများကို လိုက်ပြီးအားလုံးရဲ့ အမြင်တွေကို လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်(ကိုယ်နဲ့ အမြင်တူသည်ဖြစ်စေ အမြင်မတူသည်ဖြစ်စေ)။ တစ်ခါဖတ်ပီးရင် နောက်တစ်ခေါက်ထက်ဖတ်ဖို့ ရာကတော့ ရေးသားသူရဲ့ အရည်အချင်း၊ အရေးအသား၊့ အတွေးအခေါ်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်မရှိရင်တောင် ကိုယ်လောက်မှ မရှိရင်တော့သေချာပါတယ် နောက်တခါထက်မရောက်ဖို့ ရာ။ အရင်က လင်းလက်ကြယ်စင်(နာမည်ကိုပဲ သုံးနှုန်းလိုက်တယ် )ရဲ့ဘလော့မှာ ၀င်ဖူးပါတယ်။ အခုထက်ရောက်တယ်ပေါ့။ အပေါ်ကစာနဲ့ ပက်သက်လို့ကျွန်တော့်အမြင်ကိုတော့မပြောတော့ပါဘူး။ လင်းလက်ကြယ်စင်အနေနဲ့ဘာမှမပါပဲ အဖြူထည်လေးသက်သက် ပြန်လည်( အတင်းအကျပ်မဟုတ်ပါဘူး၊ မိမိသဘောအလျောက် ) စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေချင်တာလား၊ စစ်တပ်မုန်းတီးရေးကို ပဲ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တာလား။ ကိုယ့်ကိုကိုပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။ လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့အလိုက်မှားမှာဆိုးလို့ ပါ။ စစ်တပ်ကို အကောင်းမြင်ဖို့ ပြောတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ သူ့ အခွင့် အရေးနဲ့ သူ ရှိပီးသားပါ ကြိုက်ရာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။မိမိအမြင်ကို ဖော်ထုတ်ရဲတဲ့၊ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ကိုင်တတ်ရှိတဲ့၊ အတွေးအခေါ်၊ စဉ်းစားနိုင်စွမ်း၊ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့၊ နိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ရင် အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ရင် လက်တွဲပြီးလုပ်ချင်ပါတယ်။ အရောင်တွေ ဆေးဆိုးမခံမိပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။—————————————————————————ဒီစာနဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ပက်သက်ပြီး ဘ၀င်ကျသည် ဖြစ်စေ၊ မကျသည်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ konaygyi7@gmail.com( comment ပြန်တင်ရင်တော့ မေးကိုဖြုတ်ထားစေလိုပါတယ်။)
June 1, 2008 @ 6:28 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI